K ငြိမ်းချမ်း ● ကဗျာဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ENVOY ဂျာနယ်မှာ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေနဲ့အကြောင်း အရာအလိုက် အင်တာဗျုးများလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဆရာ၊ ဆရာမများကတော့ မောင်စိမ်းနီ၊ မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ)၊ မောင်တင်သစ်၊ မောင်သိန်းဇော်၊ စန်းဦး၊ အောင်ဇင်မင်း၊ ကိုရဲလွင်၊ သစ္စာနီ၊ မင်းသစ်၊ စမ်းစမ်းနွဲ့ (သာယာဝတီ)၊ ဖျာပုံနီလုံဦး၊ မောင်ဒေါင်း၊ ဘုန်းသက်ပိုင်၊ ကောက်နွယ်ကနောင်၊ မောင်သွေးသစ်၊ မိုးဝေး၊ အောင်ဘညိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာ၊ ဆရာမများထဲမှ ဆရာ မင်းသစ်၊ မောင်စိမ်းနီ၊ ဆရာ အောင်ဘညို၊ ဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်တို့ကတော့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဆရာ/မများနဲ့ခဏတာ မေးမြန်းခဲ့ရမှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်ရပြီး...
ကိုသန်းလွင် ● အိန္ဒိယနှင့် ဒီမိုကရေစီ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂ဝ၁၈ (၁) လွတ်လပ်သော၊ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ၊ လွတ်လပ်သောတရားစီရင်ရေး၊ ဆူညံသော အတိုက်အခံပါတီများ၊ လွတ် လပ်သောမီဒီယာနှင့် နိုင်ငံရေးနှင့်ကင်းအောင်နေသော စစ်တပ်တို့ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးကို သတ်မှတ်ထားခဲ့သည်မှာ သူ့နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးဆွဲခဲ့သော ၁၉၅ဝ ခုနှစ်မှစတင်ခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေကို နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေပြုနှင့် တရားစီရင်ရေးတို့ကိုလိုက်နာရာ၌ အခြားတိုးတက်သောနိုင်ငံများနှင့်မတူပါ။ သို့ပါသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်က Bhartiya Janata Party အာဏာရယူပြီး အုပ်ချုပ် ခဲ့သည့်ကာလအတွင်း ဘယ်သောအခါနှင့်မျှမတူအောင် ပျက်စီးခဲ့ပါပြီ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်ဗဟိုအုပ်ချုပ်ရေးမဟုတ်ဘဲ (Decentralized...
ကာတွန်း ညီပုချေ – ကြိုးစားပါ သားရယ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ညီပုချေ Related posts ကာတွန်း ညီထွေး – ခေတ်သစ် ဝေါဟာရများ (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းနေသူတွေ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ လေထဲပျောက်ကုန်ပါဦးမယ်ကွာ …. (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ တွေ့ပြီပေါ့ကွာ … (0) ကာတွန်း ညီပုချေရဲ့ အတိုးနည်းအိမ်ယာမဟုတ်ရပါ (0)
လှကျော်ဇော ● တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး – အပိုင်း (၉) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၈၊ ၂ဝ၁၈ အတွေးအခေါ်ဟောင်း လုပ်ဟန်ဟောင်းများ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေခြေတွေကို အတိတ်သမိုင်းက ချုပ်နှောင်ထားတာ။ ကျွန်တော်တို့တွေ အတွေးအခေါ်အယူအဆ ဟောင်းတွေ လုပ်ဟန်ဟောင်းတွေရဲ့တားဆီးပိတ်ပင်မှုများကို ကျော်လွှားပြီး၊ ဒီနေရာရောက်အောင်လာခဲ့ရတာ မလွယ်ပါ ဘူး။ (မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်း။ ၁၂၊ ၆ ၂ဝ၁၈၊ စင်ကာပူ)...
ရာမိုးဇင် ● ဝှက်ဖဲ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၈ ဖတ်ပါ မှတ်ပါ လေ့လာပါ အရိုးများသလေး ချေးခါးသလေးနဲ့ မြစ်ချောင်းတွေလည်း တိမ်ကောခဲ့ရပြီးပြီ။ မြစ်တွေရဲ့မာယာမှာ လှေကြုံစီး အပုတ်ချရင်း တရားပဲရနေသလို တရားပဲကျနေသလိုလို တရားစကား လှိမ့်ပြန်ပြောရင်း အကျွန်တို့ဟာ ဘုရားတတတ်တယ်။ ဘုရားရှင်ကို စစ်သုံးအမြှောက်ဆံခွံတွေနဲ့ ဘုရားပန်းအိုးထိုး လှူဒါန်းတတ်တယ်။ ဘုရား တရားမှန်းသိတယ်။...
ဇင်လင်း ● လွမ်းဆွတ်တသဖွယ်ရာ တခုသော ရွှေရတုသဘင်အခါ … (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂ဝ၁၈ ၁၉၉၅ ခုနှစ်သည် လွမ်းစရာကောင်းသောနှစ်ဖြစ်သည်။ လွမ်းစရာကောင်းသောနှစ်ဟုဆိုရသော်လည်း ၁၉၉၅ တွင် မိမိ သည် နာမည်ကျော် အင်းစိန်ဗဟိုစံပြ အကျဉ်းထောင်၌ နိုင်ငံရေးပုဒ်မ ၅ (ည) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်ကျခံနေရချိန် ဖြစ်...
ကိုသစ် (သီတဂူ) ● မုန်တိုင်းထဲက ဖယောင်းတိုင် – အပိုင်း (၁၃) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉၊ ၂ဝ၁၈ ငဘိုတစ်ယောက်ကြောင့် တိဗက်တို့ ငါးပါးမှောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ငဘိုဟူသော အသံကိုကြားလျှင် အခုချိန်ထိ တိဗက်တို့ က ထုချင်ထောင်းချင်စိတ်တွေ ရှိနေကြသေးသည်။ တိဗက်အရေးကို ဦးဆောင်ဖြေရှင်းမည့်သူမရှိ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ယခု ဘုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလားက အသက်တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်။ တိဗက်ပြည်တွင်းရေးတွေ...
Than Htay Maung’s art အောင်ဝေး – ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၀ ) (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ အကယ်၍ ဇွန်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် … ။...
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့အမှတ်တရ ပန်းချီပြပွဲ K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၉ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၃)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် “Happy 73rd Birthday, The Lady ” လို့ အမည် ပေးထားတဲ့ ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်မေတ္တာညွှန့်ရပ်ကွက် လယ်ယာရွှေမြေလမ်းနှင့် သမာဓိလမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၈၃၃)ရှိ Sagawar...
ကာတွန်းငွေကြည်၊ မြန်မာမြူးဇစ်ပွဲ နဲ့ စာရေးဆရာညီတင့် အစီအစဉ်များ K (မိုးမခ) ဇွန် ၁၉ ၊ ၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်မှာ ကာတွန်းဦးငွေကြည် ဟောပြော မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်းမှစီစဉ်သော ကာတွန်းပညာမျှဝေခြင်း အစီအစဉ်ကို ရန်ကုန်မြို့ အမှတ်(၁၇၃/၁၇၅) ပန်းဆိုးတန်းတာဝါ-အခန်းအမှတ် (၆၀၁)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်)မှာရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကာတွန်းဆရာများအသင်း ရုံး ခန်းမှာ (စနေနေ့)...
မောင်စွမ်းရည် ● ဂန္ထဝင်နဲ့ ခေတ်ပေါ် (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ယနေ့ မြန်မာစာပေလောကမှာ အမျိုးသားစာပေဆု(ကဗျာ) ရွေးချယ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀ိဝါဒ/ ဒွိဝါဒ အငြင်းအခုံလေး တွေဖြစ်နေတာကို ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ ဘာကာစာလွှာပြုနေကြတာကို ဖတ်နေရပါတယ်။ ဆရာကြည်မင်း၊ ကာတွန်းဝင်း အောင်၊ စံငြိမ်းဦး စသဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးနေကြတာတွေလည်း တွေ့ရပါ တယ်။ ဟိုလို...
သင်းရည်လွင် ● မိုးတစက် လေတစက် လူတွေ (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ ကျည်ကွယ် မျက်ကွယ် တိုးဝင်သွားချင်သော စိတ်များကို ဆိုလိုသည်။ မာန်မာန် ထန်ထန် ရိုက်ပုတ်လာသော လှိုင်းများအား ဦးခေါင်းကွဲအောင် အဲဒီလေတွေက တိုက်ပစ်လိုက်တယ်။ မိုးမိနေတဲ့ မြင်ကွင်းမှာ ကပ်သုံးပါးအကြောင်း တွေးမိတော့ ကျွန်တော့် ရေဆိုးမြောင်းကလေးက ဘာမှမစီးဆင်းချင်တော့တာ သေချာခဲ့ပုံပေါ်တယ်...
ထက်ခေါင်လင်း (Myanmar Now) ● မုဒိမ်းမှုဖြင့် ရဲအလိုရှိနေသူ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်လာခြင်း (မိုးမခ) ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၈ အမေ့အိမ်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့ မလဲလဲ့ အိမ်ရှေ့လမ်းမဘက်ကို ကြည့်နေတုန်း ဆိုင်ကယ် မောင်းသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ အဲဒီလူဟာ သူ ၁၄ နှစ်သမီး အရွယ်မှာ သူ့ကို...
Page 1 of 90212345...902»
>Cartoon Beruma - Dictator and Martyrs